VAOVAO MALAGASY: Tgv Antananarivo: Niara-nifaly tamin'ny ankizy sy ny zokiolona
Tgv Antananarivo: Niara-nifaly tamin'ny ankizy sy ny zokiolona
"Fifampizarana", "Fifanampiana", "Fifampitsimbinana".
Ireo no lohahevitra nibaiko ny Antoko Tgv eto Antananarivo, izay niarahan'Analamanga sy Itasy ary Bongolava sy Vakinankaratra nifamotoana tamin'ny ankizy madinika sy ny zokiolona ka niara-nifaly tamin'izy ireo noho izao ankatoky ny fetin'ny Noely sy ny faran'ny taona izao. Zokiolona 5 000 no nisitraka ny fiaraha-mifaly ka ny 3 000 tamin'ireo dia niara-nisakafo ary ny 2 000 kosa dia nizarana sakafo.
Ankizy madinika 5 000 koa no nozarana kilalao sy vatomamy ary biskoi. Natomboka omaly zoma ary tsy hitsahatra raha tsy amin'ny faha-29 desambra izany hetsika izany.